Iindaba -I-Beijing Orient Science kunye neTekhnoloji ye-Co, Ltd. iphehlelele inkqubo yokufumanisa uhlobo lwenqwelomoya yokubonelela abanini ngenkonzo ekhululekileyo, efanelekileyo neqinisekileyo
I-Beijing Orient Science kunye neTekhnoloji ye-Co, Ltd iphehlelele inkqubo yokufumanisa uhlobo lwenqwelomoya yokuqala ukubonelela abanini ngenkonzo ekhululekileyo, efanelekileyo neqinisekileyo
Igama elithi “ikhusi” limele ukuba liqhelekile kuthi sonke. Sivile "ngesibhedlele esikhuselayo", "indawo yokuhlala yelebhu", "igumbi lokuvavanya indawo yokuhlala" njalo njalo. Nangona indawo yokuhlala incinci ngobukhulu, inempumelelo enkulu! Namhlanje, sifuna ukwabelana nawe ngegama elitsha- "uhlobo lokhuselo lwendlela yokufihla imoto"! Namhlanje, ngokuphuhliswa kwesayensi kunye netekhnoloji, ngaba uhlolo lonyaka lweemoto yindawo yokuhlala?
USun Jianhua, ongusihlalo webhodi ye-Beijing Orient Science & Technology Co, Ltd., uthe: “Inkqubo yethu entsha yokufumanisa uhlobo lwenqwelo-mafutha inamalungelo obunini obunini. Ubukhulu becala yile teknoloji yelungelo elilodwa lomenzi kwimarike, ukubonelela ngeenkonzo zokuvavanya abanini bemoto. ”
Ekuqaleni, le nkqubo yaphuhliswa yaza yasetyenziswa yi-Beijing Orient Science & Technology Co, Ltd. ngokwesiseko sokudibana nemigangatho yokuhlola izithuthi yase-China, inkqubo iyetyisa kwaye ifunxe imigangatho yokufunyanwa kwezithuthi kwilizwe liphela kwaye iyayidibanisa. Idityaniswe netekhnoloji ye-Intanethi ekrelekrele, inokugqiba ngokukhawuleza nangokuchanekileyo izinto ezingaphezu kwe-1000 zomsebenzi wokufumanisa kuzo zonke iindidi ezisibhozo ngokusebenzisa indlela yanamhlanje yethebhulethi ephethwe ngesandla, unxibelelwano lomntu nekhompyuter kunye nonxibelelwano lwedatha.
Ngokwemigaqo efanelekileyo: izithuthi ezincinane nezincinci ezingakhweli abakhweli zixolelwe ekuhlolweni kwisithuba seminyaka emi-6; abo bangaphezulu kweminyaka emi-6 bahlolwa kanye ngonyaka; abo bangaphezulu kweminyaka eli-15 bahlolwa rhoqo kwiinyanga ezi-6. Xa kuziwa ekuhlolweni kweemoto, amaqabane amancinci aya "kutshintsha umbala" ngalo lonke ixesha bethetha ngokuhlolwa kwemoto. Ukuba zininzi iimoto kwindawo yokuhlola, indlela isesekude. "Uhlobo lwesitishi indawo efanelekileyo yokuhlola izithuthi" inika umdlalo opheleleyo kwiimpawu "ezincinci, ezikrelekrele neziguqukayo" zenkqubo yokufumanisa uhlobo lwesithuthi ". Ibeka "isikhululo sokuhlola esifanelekileyo" kwiivenkile zokulungisa iimoto zedolophu, kwiivenkile zokuthengisa iimoto, kwiindawo zokupaka, kwiindawo zokuhlala nakwezinye izithuthi esixekweni, ukwenzela ukuba abantu bakwazi ukuhlola iimoto ezikufutshane, nokusombulula ingxaki engapheliyo " ukuhlolwa kwezithuthi okunzima ”ixesha elide.
USun Jianhua, ongusihlalo we-Beijing Orient Science & Technology Co, Ltd., uthe: “iingenelo zetekhnoloji yethu zijolise ikakhulu kwimeko yangoku, oko kukuthi, ukusasazwa kabini. Ngokujikeleza kwangaphandle, sithumela kuMzantsi-mpuma weAsia naseYurophu. Ngokuhambelana nokuhamba kwangaphakathi, ikakhulu sinikezela ngenkonzo entsha yenkonzo. Sinikezela ngovavanyo lonyaka kunye novavanyo lwesibini, kubandakanya novavanyo oluqhelekileyo lomzimba lweemoto kunye nokuchongwa kwesondlo. Ezi ziluncedo zethu. ”
Ngohlobo "lwendlela yokukhusela imoto", ukuhlolwa kwezithuthi kulula kakhulu. Kumaziko ovavanyo, iyabhetyebhetye kwaye ilungele, kwaye inokusetyenziswa kwangoko. Iphelisa ukufakwa kwezixhobo kunye nekhonkco lokulungisa ingxaki (akukho sidingo sokwakha iworkshop), igcina utyalo-mali lobunjineli kwaye inciphisa kakhulu utyalo-mali kunye neendleko zokwakha. Kubanini beemoto, iindawo zokubona zinokucwangciswa kwindawo esezidolophini, ekulungeleyo ukuba uninzi luhlole izithuthi ezikufuphi, kuthintelwe ukuhamba umgama omde kwezithuthi, konga ukusetyenziswa kwamandla kunye nokunciphisa ukuxinana kwendlela.
USun Jianhua, ongusihlalo weBeijing Orient Science & Technology Co., Ltd., uqhubeke wathi: “umzekelo, xa siseBeijing, olona hlolo lwesithuthi lumalunga neekhilomitha ezingama-50. Ukuba sivumela wonke umnini makakhangele imoto emnyango, okokuqala, ukuxinana kwendlela kuya kuncitshiswa, okwesibini, ukukhutshwa kwezithuthi kuya kuncitshiswa. Okwesithathu, siya konga ixesha lethu, eyona nto ibaluleke kakhulu kuthi. ”
Kwixesha elizayo, amashishini aza kuphehlelela ngamandla ukuvavanya indawo yokuhlala, kunye nezikhululo zovavanyo ezingama-2000 zisasazwe kwikona nganye yesixeko, zibonelela ngenkonzo ekhululekile, efanelekileyo neqinisekileyo kubanini bezithuthi.
Igumbi A419, umgangatho we-4, isakhiwo se-zijinghua, iCuiweizhongli 14 #, isithili saseHaidian, eBeijing